Hay’adda ICRC oo dhimaysa Shaqooyinkii ay ka waday Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Hay’adda ICRC oo dhimaysa Shaqooyinkii ay ka waday Soomaaliya
Hay’adda ICRC oo dhimaysa Shaqooyinkii ay ka waday Soomaaliya
Hay’adda ICRC ayaa sheegtay inay yareyn doonto dhaqdhaqaaqii ay ka waday dalka Soomaaliya, iyadoo ay ugu wacan tahay dhanka amaanka iyo Hay’adda oo aqbali weysay amni darada soo wajahday shaqaalahada Hay’adda.
Bishii Maarso ee sanadkaan Mid kamid ah shaqaalaha Hay’adda oo lagu magacaabayay Cabdi Xafiid, ayaa lagu dilay afaafka hore ee xafiiska Hay’adda, sidoo kale Bishii May, Sonja, oo ahayd Kalkaaliso ayaa lagu afduubtay gudaha magaalada Muqdisho. Labadaasi dhacdo ayaana keenay in Hay’adda ay qaadato go’aanka ay ku yareyneyso dhaqdhaqaaqii ay ka wadeen gudaha dalka Somalia.
Hay’adda waxay sheegtay inaysan wada joojin doonin shaqadii ay ka waday dalka Somalia oo ay sii wadi doonto taageeradda Hay’adda Bisha Cas Somalia, Taageerada caasimaad ee ibsitaalada Keysaneey, Madiina, Kismaayo iyo isbitaalka magaalada Baydhabo.
Waxay Hay’adda warbixinteeda ku sheegtay inay muhiim tahay in la fahmo in shaqaalaha hay’adda ay yihiin awooda ay ugu shaqeynayaan dadweynaha caawinaada u baahan, sidaasi daraadeedna ay ka fakarayaan amnigooda.
Ugu dambeyn Hay’adda ayaa sheegtay inay dhaqdhaqaaqii ka wadeen Somalia ay dib usoo celin doonaan marka shaqaalahooda ay helaan damaanad amaan oo ay ku dhaqdhaqaaqi karaan.